Work Smartဖြစ်စေဖို့ – Better HR Blog
အလုပ်ကို အကုန်သိမ်းကြုံးပြီး ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ထက် smartကျကျနဲ့ပြီးအောင် လုပ်နို်င်တဲ့ နည်းလမ်း(၅)ချက်ကတော့….
၁။ အဆီပိုတွေကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်
အဆီပိုဆိုတာဟာ အလုပ်အပိုတွေကို ပြောတာပါ။ လုပ်တော့လုပ်ရမယ် အရမ်းအရေးမကြီးသေးဘူးဆိုတဲ့ အလုပ်မျိုးပေါ့ ။ အဲ့လို အလုပ်တွေအစား အရေးတကြီးပြီးဖို့ လိုတဲ့ အလုပ် သုံးလေးခုလိုက် ချရေးပြီး အရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
၂။ ရလဒ်နဲ့တိုင်းပါ အချိန်နဲ့မတိုင်းပါနဲ့
အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီးလာရင် လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် productivity မြင့်တယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ productivity ကို အချိန် ဘယ်လောက်မှာ ဘယ်နခုပြီးတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ရဲ့ ရလဒ်နဲ့တိုင်းပါ။
အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ စိတ်ရှ်တဲ့သူ တနည်းအားဖြင့် အလုပ်ကိစ္စတွေကို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ သူမျိုးဟာ တပန်းသာလှပါတယ်။ တစုံတယောက်က အကူအညီလိုရင် ကူညီပေးတတ်တဲ့သူ၊ အလုပ်မှာဆိုရင်လည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်တဲ့သူမျိုးဟာ work smart ဖြစ်တဲ့လူတစ်မျိုးပါပဲ။
အလုပ်က အထက်အရာရှိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Freelance လုပ်တဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ clientနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ရပါသေးတယ်။ အဲ့လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေမရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်အတော်ကြာ ကိုယ်ကြိုက်ရာတွေးပြီး နားလည်မှုလွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
၅။ တချို့သော အလုပ်တွေကို အလိုအလျောက်ပြီးစေခြင်း
အလုပ်တွေ များများပြီးတာရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိချင်လား?
မလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကို အလိုအလျောက်ပြီးအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Mark Zukerberg က တူညီတဲ့ဝတ်စုံတစ်မျိုးကိုပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝတ်နေသလို​ပေါ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ မလိုတဲ့အလုပ်တွေကို သူ့ဘာသာအလိုအလျောက် ပြီးစေသလိုပါပဲ။ ဒါဟာ မလိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ချွေတာခြင်းပါပဲ။
ဒီအကြောင်းအရာအတွက် အချက်အလက်တွေကို Inc Blog ကနေ မှီငြမ်းထားပါတယ်။